पारसको जर्सी नम्बर ७७ किन ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
पारसको जर्सी नम्बर ७७ किन ?
७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टीमका निवर्तमान कप्तान पारस खड्काले आज आफ्नो ३२ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । विगत १४ वर्षदेखि नेपाली क्रिकेटमा सक्रिय खड्काले आफ्नो जन्मदिन घरपरिवार र साथीहरुसँग मनाउँदैछन् । उनले जन्मदिन मनाइरहँदा उनको लगाउने जर्सीको प्रसङ्ग निकाल्नु उचित हुने देखिन्छ ।
पारसले क्रिकेटमा प्रवेश गरेसँगै उनले जर्सी नम्बर ७७ नम्बर अंकित जर्सी लगाउँदै आएका छन् । उनको जर्सी नम्बर धेरैलाई याद भए पनि जर्सी नम्बर भित्र लुकेको राज भने कमैलाई मात्र थाहा होला । उनले आफ्नो जर्सी नम्बर आफ्नो जन्मदिनको अंक बनाएका छन् ।
उनले जन्म कात्तिक ७ गते हो । कात्तिकलाई ७ को महिना मानिन्छ भने उनी जन्मेको मिति पनि ७ गते भएकोले उनले आफ्नो जर्सी नम्बर ७ रोजेका हुन् । पारसलाई यो जर्सी नम्बर एकदमै फापेको पछि छ । उनी नेपाली क्रिकेटमा प्रवेश गर्दा नेपाली क्रिकेट डिभिजन फाइफमा थियो । तर अहिले उनको कप्तानीमा नेपाल एक दिवसीय मान्यता प्राप्त देश बनेको छ ।
जर्सीकै कुरा गर्दा नेपाली क्रिकेट टीमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको पनि कुरा जन्ममितिसँग सम्बन्धित नै छ । उनी अहिले नेपाली क्रिकेट टीम लगायत अन्य देशहरुमा खेल्ने लिगहरुमा पनि उनले २५ नम्बरको जर्सी लगाइरहेका हुन्छन् । खासमा उनको भाञ्जीको जन्ममिति २५ गते रहेछ तर भाञ्जीको मृत्यु भइसकेको छ । उनै भाञ्जीको सम्झनामा सन्दीपले आफ्नो जर्सी नम्बर २५ राखेका हुन् ।
तर, इंडियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा भने २५ नम्बरको जर्सी अर्कै खेलाडीले लिइसकेका कारण उनले भाञ्जीकै जन्ममहिना बैशाख अर्थात १ नम्बरको जर्सी लगाएर खेलिरहेका छन् ।
Previousमहराको तिहार हिरासतमै, अदालतले फेरि थप्यो म्याद
Nextगायक पक्राउ प्रकरण: ‘नाङ्गै हिँड्छु भनेपछि समात्नुपरेन !’